उफ् !: (लू)उपन्यासमा सीमाक्षेत्रको तस्बिर –दिनमान गुर्मछान
कति छन् कति यो मनभित्र कुराहरु ।
(लू)उपन्यासमा सीमाक्षेत्रको तस्बिर –दिनमान गुर्मछान
(लू)उपन्यासमा सीमाक्षेत्रको तस्बिर
(नयाँ पत्रिका दैनिक, २०६९ बैसाख ३० गते शनिवार)
नेपाली समाजको त्यो हाम्रो आफ्नै भूमि जहाँ नेपाली भएर पनि नेपाली हुन सकिरहेका छैनन् । त्यहाँका बासिन्दाको आँगन नेपालनै हो । तर, बजारचाहिँ भारतका सिमावर्ती क्षेत्र रहेको छ । उनीहरू आफ्नैखाले समस्याका जञ्जालमा परेका छन् । भारतसित सीमा जोडिएको ‘पत्थरपुरवा’को सेरोफेरोमा रहेर उपन्यासकार नयनराज पाण्डेले ‘लू’मार्फत त्यहाँको सामाजिक समस्यालाई राष्ट्रिय समस्यासित जोड्न खोजेका छन् । भर्खरै बजारमा प्रकाशित भएर चर्चा बटुलिसकेको ‘लू’ उपन्यास तराईको जटिल सीमावर्ती क्षेत्रको कथा र व्यथा हो ।
तराईको जनजीवनलाई उनले आञ्चलिक ढंगबाट प्रस्तुत गरिरहँदा पाठक त्यही भूमिमा पुग्छन् । ‘पत्थरपुरवा’को विशिष्टता र मौलिकता भेटिन्छ । स्थानीय पात्र र प्रवृतिले पश्चिम नेपालको गाउँको आफ्नै मौलिकता रहेको छ । गरिब गाउँलेहरूको दैनिक समस्या र सीमापारिबाट भइरहने दमनको चिरफार पाइन्छ । इलैयाको प्रमुख पात्र भूमिकाले तराईको जनजीवन, रहनसहन, चरित्रलाई छर्लंगै पार्न सकेको छ । गाउँले परिवेशमा इलैया कडा र सुरो स्वभावको पात्रलाई विभिन्न समय र परिवेशमा अलग–अलग ढंगबाट देखाइएको छ । समयमा वर्षा नहुनाले सुख्खा मौसममा निम्तिएको चरम गरिबी,भोकमरीको त्रासद् अवस्था पाइन्छ । भारतीय सीमाका सुरक्षाकर्मी वेलावेला गाउँमा प्रवेश गरी दिएको यातनाले पिल्सिएका छन् गाउँले । कमलाको कथाले मन छुन सक्छ । अविवाहित आमा हुँदा भोग्नुपरेको समस्या पाइन्छ । रेडियोलालको मुख्र्याइँले धार्मिक दंगा फैलिँदा साम्प्रदायीक सद्भाव भने बिथोलिन पाएको छैन । यहाँ सामाजिक सहयोग र मानवता पनि पाइन्छ ।
बहराइचको शम्भुरामले नेपालगन्जका नेतालाई आफ्नो मुठीमा राखी नचाएको प्रसंगले दिमाग रन्थनिन पुग्छ । पात्रहरू इलैया, नन्दु चिडिमार,बजरंगी,रेडियोलाल,हरदेई,चमेली,वृजलाल,टुटे पण्डित,नुसरत,करिम,अनवर जस्ता पत्थरपुरवामा छन् । जसले उपन्यासको कथा र घटनाक्रमलाई अघि बढाउँदै दुःखको भुमरीमा लैजान्छ । इलैयाजस्तो कडा र ज्याद्रो व्यक्तिको प्रेम प्रसंगले पाठकलाई ध्यानाकर्षण गर्छ । प्रेममा विछट्टै शक्ति हुँदो रहेछ । इलैयाभित्र प्रेमले मानवीय संवेदनायुक्त बनाएको छ । प्रेम जबर्जस्ती पनि हुँदैन । ‘नुसरत’प्रतिको इलैयाको प्रेम आशक्तिले परिवर्तन ल्याउँछ । ऊ दिनप्रतिदिन प्रेमरोगीझैँ देखिन्छ । नुसरतकालागि जेपनि गर्नसक्छु भन्ने इलैयाले जब नुसरतले उसलाई मन पराउँदैन भन्ने थाहा पाउँछ त्यसबेला के हुन्छ ? यो जान्नकै लागि पनि पाठक आतुर हुन्छन् ।
हम्रै नेपालीले भोगिरहेका समस्या, दुःख,ज्यादतीको प्रस्तुति उपन्यासको मुख्य पाटो भएको छ । भारतीय सैनिकको अत्याचार, अपराधिक गतिविधि,रोग,भोक र प्रकृतिसितको संघर्ष पाइन्छ । त्यसैले उपन्यासले साहित्यिक मूल्य बोकेको छ । पश्चिम नेपालको तराई समाजको चित्रणले त्यहाँको मूल्य,मान्यता,त्यहाँका व्यवहारको अध्यन गर्न सकिन्छ । इलैयाको अराजक र उद्दण्ड चरित्रको निर्माणसँगै आमाप्रतिको प्रेमभाव,पूजा अनि नुसरतप्रतिको आर्कषण र प्रेम आशक्तिले तराईको जनजीवन बुझ्न सजिलो पार्नुका साथै गरिबीबाट मुक्ति खोज्न नाबालक छोरी बेचेको प्रसंगले अशिक्षा र भोकमरीको गाथा बोकेको छ । भारतीय दादागिरी र गुण्डागर्दी सीमाक्षेत्रको मुख्य समस्या हो । दिनहँु नेपाली चेली बलात्कृत हुन्छन् भन्ने प्रसंग नुसरतको बलात्कारको घटनाले दर्साएको छ । यसर्थ दक्षिणी सीमाका लाखौं व्यक्तिका सवाल उठाएका छन् –उपन्यासकार पाण्डेले । नेपाली राजनीतिमा दक्षिणी क्षेत्रको प्रभाव कसरी छ ? हिन्दू र मुस्लिमबीच वा मधेसी र पहाडीबीच दंगा कसरी भड्किँदो रहेछ भन्ने यथार्थ‘लू’मा पाइन्छ । गरिबीले सामूहिक आत्महत्या गरेको अवस्था,समाजमा एक हुनुपर्ने विचार,आखिर आफ्नै छिमेकीले साथ र सहयोग गरेको यस्ता घटनाले मर्माहत बनाउँछ ।
भाषाशैली आकर्षक हुनुका साथै सरल र सरस छ । सरल र छोटा वाक्यले आकर्षक भएको छ । मधेशको सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक विषयवस्तुलाई पाठकसामु सुन्दरशैलीमा पस्केका छन् । ‘लू’मा प्रयोग भएका भाषाशैलीले पाठकलाई तान्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
उपन्यास समग्रमा राम्रो भए पनि त्रुटि नै नभएको वा कमजोर पक्ष नै नभएको भने होइन । एउटा अग्लो उपन्यासमा केही सामान्य अलमल भने भेटिन्छ नै । जस्तै–एउटा राम्रो चित्रकार हुनसक्ने जागेश्वरलाई सत्ता विरोधी चित्र बनाएको आरोपमा अञ्चलाधिशकहाँ पु¥याउँदा पञ्चायतकालको झल्को देखिनुले समयकाल खण्ड नमिलेको देखिन्छ । कविताले गर्भपतन गर्न नहुने गरी गर्भपतन गराउँदा गराउँदा अक्षम शरीरले मधेसीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेको प्रसंगमा पुनः विवाहपश्चात पनि गर्भपतन निरन्तर भइरहन्छ । गर्भपतनको पराकाष्टा नाघेकी कविता एकदिन पोइल जान्छे । रेडियोलाल र कविता चौबीसैघण्टा सँगै रहेको देखिदादेखिदै यो कसरी सम्भव छ । जसले कथाको नयाँ मोड दिनमात्र खोजेको देखिन्छ । स्थानीय भाषा र नेपाली भाषाको एउटै वाक्यमा प्रयोग हुनुले खिचडी भएको छ । तर पनि उपन्यासका यी प्रसंगले पाठकलाई केही हदसम्म मधेसी मूलको जनजीवनको जानकारी गराउँछ ।
विशेषतः नवीनतम शैलीमा चिनिएका नयनराज पाण्डे ‘उलार’ उपन्यासबाटै परिचित छन् पाठकहरूमाझ । त्यस्तै ‘निदाए जगदम्बा’ले दिएको ख्यातिले ‘लू’ उपन्यासको आँकलन गर्न सजिलो बनाउँछ नै । ‘उलार’को तराई परिवेश ‘लू’सम्म आइपुग्दा अझ दक्षिणी सीमाक्षेत्रको तस्बिर बोकेर आउन सफल भएको छ । सीमान्तीकृत नागरिकको बाँच्ने उपक्रममा भोग्नु परेको नियतिको दस्तावेज बनेको छ लू ।
‘लू’ मा एउटा यथार्थको डरलाग्दो विषयलाई उठाइएको छ । अनुसन्धानात्मकझैँ लाग्ने यो उपन्यासले नेपालीले भोग्नुपरेको सीमापीडालाई उठाएको छ । जसलाई फरक किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाली साहित्यिक बजारमा आख्यानको बढ्दो मोहमा उपन्यास अग्रस्थानमा देखिएको भान हुन्छ । गएको पछिल्लो वर्ष यस्ता महत्वकांक्षी उपन्यासहरूको लाइनै लागेको थियो । यो वर्ष पनि उपन्यासको प्रकाशन उकालो लाग्दो हुने छ भन्ने संकेत देखिएका वेला ‘लू’ले पाठकमाझ आफूलाई सीमाक्षेत्रको कथाको रूपमा चिनाउन सफल भएको छ ।
एउटा उत्कृष्ट उपन्यास लाग्न सक्ने ‘लू’ ले यिनै समाजका गरिब,किसान,मजदुर,भूमिहीन सुकुम्बासीको सवाल उठाएको छ । उपन्यासले किसान जीवनलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । त्यसैले अन्तमा विभिन्न प्रश्नहरू पनि छोडेर गएको छ । के ठेगाना परिवर्तन भएको पत्थरपुरवा फेरि नेपालको हुन सक्छ ? तीतो यथार्थ या मनोगत प्रलाप ??? मा टुटे पण्डितको पत्रले पाठकलाई ठूलै झट्का दिन्छ । मस्तिष्क रन्थनिने गरी करेन्ट लाग्छ । के यो उपन्यासकारले भनेझैँ भ्रम थियो ? उपन्यासको अन्त्य नै अर्को अध्यायको सुरूवातझैँ लाग्ने गरी भएको छ ।
Posted by Nayan Raj Pandey/Nepal-नयनराज पाण्डे,नेपाल at 4:42 AM
तस्विरमा म:नयनराज पाण्डे
(लू)उपन्यासमा सीमाक्षेत्रको तस्बिर –दिनमान गुर्मछा...
Loo, the Story of Borderside-By Ken Subedi
"लू"बारे फेसबुक र ईमेल प्रतिक्रियाहरु-जस्ताको तस्त...
हेटौडामा "लू"को अन्तर्क्रियाबारे समाचारहरु
Tragedy ofaBorderland-Cp Aryal
Loo : A Picture of the Othered
Subaltern Voice in Ular
यस ब्लगका सामग्रीहरु व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होइनन् । कतै उद्धरण गर्नु परेमा वा प्रकाशित वा प्रसारित गर्नु परेमा ब्लगरको स्वीकृति अनिवार्य छ. Theme images by Storman. Powered by Blogger.